Ken Follet ane zuva rekuzvarwa. Mitsara kubva kumatanhatu enhoroondo dzake dzakakurumbira | Zvazvino Zvinyorwa
Ken Follet ane zuva rekuzvarwa. Mitsara kubva kumatanhatu enhau dzake dzakakurumbira
Ken follet akaberekwa musi waJune 5, 1949 mu Cardiff, Wales, uye nekufamba kwenguva ave mumwe wevanyori inonyanya kuzivikanwa uye kuverenga wepasi rose. Nekuti pachave nevanhu vashoma vasina kuverenga Mbiru dzenyika. Kune avo vanosara ipapo ndiko kusarudzwa kwangu kwemitsara kubva 6 yemanoveli ake ndiani akaisa kwazviri: a chirevo chezvinyorwa zvinozivikanwa zvemazuva ano.
2 Mbiru dzenyika
3 Kudonha kwehofori
4 Nguva yechando chenyika
5 Murume anobva kuSt
6 Nzvimbo inonzi rusununguko
7 Ndege yekupedzisira
Follet ndomumwe wevanyori avo ivo vanoziva zviri nani nzira yekusvika kune veruzhinji. Kuyambuka nyore kana kudzokorora nenyaya dzako nhoroondo nhoroondo uye folkloric matauriro, izvo hapana munhu angamurambe ndezvake hunhu mukusvikira avo vaverengi (vazhinji) vasina kana dambudziko neaya mazano mune zvinyorwa.
Vakatsiva mavhiki aya paterevhizheni kuchinjirwa kwe bhuku rake rakakurumbira, Mbiru dzenyika. Asi chero yedzimwe shanduro dzinogara dzichikanganisa zvinyorwa zvake zvekutanga. Uye kunyangwe yebudiriro yakasimbiswa nemabhuku anotevera, Vashoma vakambove nemhedzisiro yenhoroondo yekuvakwa kweiyo medieval Kingsbridge Cathedral. Kana kuenderera kwayo mu trilogy, Nyika isingaperi y Mbiru yemoto naivowo havana kuupfuura.
Iyo trilogy ye Zana ramakore yakagadzirwa ne Kudonha kwehofori, Nguva yechando chenyika y Chikumbaridzo chekusingaperi. Uye zvimwe zvakafanana Kiyi iri munaRebecca, Muchinangwa, High risk, Wechitatu mapatya kana Mumuromo wedhiragoni. Izvi ndizvo kuunganidzwa kwemitsara kwevamwe vavo.
Ndinokuda sechamupupuri, seshumba, seshungu dzisingadzoreki.
Philip akaziva kuti, muhondo yevagari vemo, wekutanga kukuvadzwa yaive yeruramisiro.
Mhiko mashoko chete! Haisi chinhu ichienzaniswa neichi. Izvi ndezvechokwadi, uyu ndiwe neni.
Kutora mhiko ndiko kuisa mweya wako munjodzi, aigara achidaro. Usambofa wakapika kunze kwekunge iwe ungatofa kufa pane kuiputsa.
Vakuru vaviri vanodanana vanofanira kukwanisa kuita sarudzo pamwe chete, pasina kuteererana.
Iko kugona kuteerera kune vakangwara vanhu vasingabvumirani newe itare-yakaoma-kuwana-tarenda.
"Kwete, handisi kuzotuka Ishe Fitzherbert kana VaPerceval Jones," akadaro, achinongedza ngowani mbiri dzepamusoro mumutsara wepamberi. Ini ndinongoti: changamire, muri nhoroondo.
Nguva yechando chenyika
Erik anga ari mumwe wevanhu vasina kugona vanotya hupenyu zvekuti vanosarudza kurarama vachidzorwa neane masimba esimbi uye kuti vaudzwe zvekuita nekufunga nehurumende isingabvume kukakavara. Ivo vaive mapenzi uye vane njodzi, asi paive nevazhinji vakaita saiye.
Zvirinani kutambura nemhedzisiro yezvakaipa pane kugara wakadzikama usingaiti chinhu.
Ukasabatanidzwa, zvinoitika imhosva yako.
Murume anobva kuSt
Hukama hwerudo hauna kufanana nehwekunamata. Kunonamatwa mwari. Vanhu chete ndivo vanogona kudiwa. Kana tichinamata mukadzi hatigone kumuda. Zvino kana tikaziva kuti haasi mwari, tinomuvenga. Izvo zvinosuruvarisa.
Nzvimbo inonzi rusununguko
Chiremba akazorora maoko ake patemberi dzake uye akanzwa zvishoma nezvigunwe.
- Wakavhiringika here?
-Rudo nemuchato zvinondivhiringidza, asi handosaka musoro wangu uchirwadza.
Aiziva kuti dzimba dzemitambo nemitambo zvaivepo, asi aive asina kumbofungidzira kuti chingave chinhu chakafanana nezvinoonekwa nemaziso ake izvozvi: kupisa, utsi hwemarambi, zvipfeko zvenguva zvakanakisa, kumeso kwakapendwa, uye kune izvo nyaya. Pamusoro pazvose, manzwiro… Hasha, rudo rwunodisa, shanje neruvengo zvakanyatsomiririra zvekuti moyo wake wakarova muchipfuva chake nemanzwiro akafanana aangadai akanzwa dai zvese izvi zvaiitika zvechokwadi.
Nemusiyano chete wekuti panguva iyoyo tinogona kunge takatenderedza nyika nemisoro yedu yakasimudzwa, pachinzvimbo chekuidzikisa sechiratidzo chekunyara.
Isu tinofunga isu tiri kusangana neyakaomarara, asi isu hatizive zvinoreva izwi.
Muvambi wechitendero chechiKristu akakonzerawo nhamo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ken Follet ane zuva rekuzvarwa. Mitsara kubva kumatanhatu enhau dzake dzakakurumbira
ChiLatin: baba verudo
Maitiro ekunyorera inoverengeka: kugadzira mavara